नेपाल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब पुँजी वृद्धिको लक्ष्य पूरा « GDP Nepal
नेपाल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब पुँजी वृद्धिको लक्ष्य पूरा
Published On :5May, 2018 10:43 pm
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ७० वर्ष पुरानो नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को ७९ औं वार्षिक साधारण सभाबाट ४.५२ प्रतिशत बोनस सेयर पारितपछि बिमा समितिले तोकेको समयभित्र १ अर्ब पुँजीवृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेको छ । कम्पनीले बोनस वितरण पश्चात् हुने पुँजी वृद्धिको ६५ प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गरेको छ ।
कम्पनीको लक्षित पुँजी वृद्धिका लागि यो हकप्रद अत्यावश्यक देखिएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५९ करोड ९ लाख रुपैंया रहेकोमा १ अर्ब पुँजी पु¥याउन ४.५२ प्रतिशत बोनस सेयरपछि ६१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धिपछि ६५ प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष अर्जुन पौड्याल शर्माले जनाएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कम्नीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रहेको थियो ।
सोही आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १ बराबर १ बोनस सेयर पारित गरी कुल चुक्ता पुँजी ३० करोड १८ लाख पु¥याउन सफल भएको थियो । उनले पहिलो कम्पनीलाई श्रेष्ठ बनाउन बिमा दाबी प्रक्रियालाई थप चुस्त बनांउदै लैजानेतर्फ कम्पनीको मूल उद्देश्य रहेको जनाएका छन् । यसका साथै जोखिम बहनमा स्तरोन्नति गर्दै आगामी दिनमा पूर्ण व्यवसायीक्ता तर्फ अग्रसर हुन आक्रामक बजारीकरण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
बोडीको बजार खोज्दै किसान !
सर्लाही । निषेधाज्ञाका कारण किसानको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । सर्लाहीको लालबन्दीका किसान यसरी
विशाल ग्रुप भन्छः आयान डिष्ट्रिब्युटरसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बदनाम गराउने षडयन्त्र भयो
काठमाडौं । औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले विवादास्पद आयान डिष्ट्रिब्युटरसँग आफ्नो समूहको कुनै प्रत्यक्ष
पर्यटक अभावमा सुनसान पाटन दरबार क्षेत्र
काठमाडौं । कोरोना संकटले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारिरहँदा नेपालमा पनि यसको असर देखिएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री भर्सेस उद्योगमन्त्रीः कसरी आउला लगानी ?
काठमाडौं । लगानी सम्मेलन भव्यताका साथ चलिरहेका बेला विभागीय मन्त्री भने पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् ।